10 Obodo Kachasị Mma Obodo Ochie Iji Gaa leta Worldwide | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Obodo Kachasị Mma Obodo Ochie Iji Gaa leta Worldwide
(Emelitere ikpeazụ On: 06/02/2021)
Gburugburu ọdịdị kachasị mma gbara ya gburugburu, emetụbeghị oge, bụ 10 nke kasị mma mara mma obodo ochie ileta n'ụwa nile. Gafee Europe na China na-adọrọ mmasị obodo ochie, njem a ga-ejupụta n'akụkọ sitere na mgbe ochie ruo oge anyị.
Okporo ígwè iga bụ ihe kasị environmentally friendly ụzọ njem. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets Na Europe.
1. Kasị mara mma Old Towns ileta Na Europe: Civita Di Bagnoregio, Italy
1200 afọ, nke sitere na narị afọ nke isii, Civita di Bagnoregio bụ nke kacha ochie obodo mara mma na Europe. ’Ll ga-ahụ ụlọ a n’eluigwe 110 kilomita site na Rome, na-ezu ike n’elu ugwu. Ọ bụrụ na ị gaa na obodo a mara mma nkume n'oge okpomọkụ, ị nwere ike izute 100 ndị bi na-alaghachi iji nwee ọ viewsụ ihe atụ maka mpaghara Viterbo.
Ọzọkwa, ị ga-ahụ na ọ kachasị adọrọ mmasị ịhụ na obodo ahụ debere ya ochie ije mgbe 2 agha ụwa, na ọtụtụ nke ugwu mgbawa. N'ihi ya, a na-eme nnukwu mgbalị iji chebe nkume Italian a, na-egbochi ya ịnwụ. Ya mere, tupu ọ apụ n'anya ị kwesịrị were ụgbọ oloko ahụ gaa Viterbo, site na Rome Termini na ezumike Italy ọzọ gị.
Rome ka ya na ụgbọ oloko gaa Viterbo
Siena gaa Orvieto Na ụgbọ oloko
Arezzo nwere ụgbọ oloko na Orvieto
Perugia gaa Orvieto Na ụgbọ oloko
2. Ọtụtụ Obodo Ochie Mara Mma ileta na mba ụwa: Rothenburg Obodo Ochie, Germany
Mgbe ị nọ na Germany, ị ga-agagharị n'okporo ụzọ ịhụnanya, a 40 nkeji’ ụgbọala n'etiti obodo kacha maa mma na Germany. Ọ bụkwa ebe ị ga-ahụ otu n’ime 10 kasị mara mma ochie obodo ileta n'ụwa nile, Rothenburg.
Rothenburg ob der Tauber bụ a kpokọtara obodo ochie na Bavaria, Germany. A naghị emetụ ụlọ ya ndị nwere agba agba ọkara bekee aka na ya mgbe oge dị n'azụ mgbidi obodo ahụ nke ọma. Obodo mara mma nke oge ochie nwetara aha ya site na onodu ya n'elu osimiri Tauber, ebe dịpụrụ adịpụ maka celts, dị ka narị afọ nke mbụ O.A.. Rothenburg si Plonlein, Akara square, quaint alleys, na Castle Gardens-eme ka ọ otu n'ime ndị kasị maa mma obodo oge ochie ileta na Europe, na ụwa.
Berlin na Rothenburg Ob Der Tauber Na Traingbọ oloko
Stuttgart na Rothenburg Ob Der Tauber nwere ụgbọ oloko
Munich na Rothenburg Ob Der Tauber Na Traingbọ oloko
Frankfurt na Rothenburg Ob Der Tauber na ụgbọ oloko
3. Obodo Ochie Mara Mma Kachasị Mma ileta Gburugburu ụwa: Fenghuang Na China
Phoenix Obodo Ochie, Fenghuang bụ otu n’ime obodo ochie echekwara nke ọma na China. Mgbe ị batara n'ime obodo mara mma, a ebube n'anya àkwà mmiri, ụlọ arụsị, na ndu n’elu mmiri ga-ekpughere gị onwe gị, n'etiti oke osisi na okike na gburugburu.
Na a akụkọ ihe mere eme nke 400 afọ, nke ndị eze Ming na Qing, Fenghuang, bụ otu n’ime ebe a na-agaghị echefu echefu na China. Otu ihe na-akpali akpali ma na-adọrọ mmasị banyere obodo ochie a na China bụ na ndị bi n’obodo ahụ, ndị pere mpe nke Miao na Tujia, ka na-echekwa ọdịnala ọhụụ na ndụ n'ime ụlọ osisi ochie.
4. Nanjing Obodo Ochie, China
Nnukwu mgbidi obodo ochie kachasị n'ụwa, Nanjing, dị na Osimiri Yangtze. Nanjing bụ otu n'ime 4 isi obodo ochie na China. Na mgbakwunye, Nanjing bụ otu n'ime obodo mgbe ochie mara mma ileta n'ụwa niile. Nke a bụ n'ihi nnukwu mgbidi obodo ahụ ka na-eguzo ma gbaa ya gburugburu, idebe ya n'oge na akụkọ ihe mere eme emetụtaghị ya.
Otú ọ dị, echiche kachasị dị ịrịba ama nke Nanjing bụ n'abalị. Mgbe ọchịchịrị gachara, obodo ahụ dum na-enwu gbaa, na ọmarịcha ụlọ nsọ Confucius dị egwu karịa. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịga na akara ngosi ndị ọzọ site na usoro Ming, na narị afọ nke 14. Ọmụmaatụ, Sun Yatsen’s Mausoleum.
5. Kasị Mma Obodo Ochie Iji Gaa Na Europe: Avignon, France
Ọmarịcha obodo ochie nke Avignon na Provence wuru na narị afọ nke 14. Obodo a nke nwere mmasị na ya bụ ebe ndị poopu nọ, na ọdịghị gị mkpa ịnọ n’okwukwe Ndị Kraịst, inwe mmasị n'ebe ndị poopu nọ’ obí eze. Mgbe ị masịrị obí eze, ị ga-aga njem ụgbọ mmiri na osimiri Rhone mara mma ebe Avignon nọ na ọdụ aka ekpe ya, ma ọ bụ lelee ama akwa Saint-Benezet, site na narị afọ nke 12.
Obodo ochie obodo na-ọma zoro ezo n'azụ mma-echebewo ramparts na 39 ụlọ nche. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị na-eleta Avignon na ngwụsị izu, ị ga-enweta Ahịa Sunday flea, ma ọ bụ n’oge ọkọchị, mgbe ahụ ị ga-enwe obi ụtọ ịga ememme nkiri a ma ama Avignon “na” na “anya” na July.
Paris na Avignon Na A Train
Ọ dị mma iji ụgbọ oloko were na-efegharị
Marseilles na Avignon Na A Train
6. Kasị Mma Obodo Ochie Iji Gaa Na Europe: eji
Ihunanya, maa mma, na owuwu nke narị afọ nke 14, Bruges bụ otu n'ime obodo mara mma kacha ochie na Europe. Obodo ochie ama ama ama nke Belgium, eji ụlọ ahịa chocolate, ebe ahia, àkwà mmiri, na ochie akụkọ ihe mere eme center na-adọta 8 nde ndị ọbịa kwa afọ.
Ya mere, ị ga-anụrịrị ya ụtọ ma ọ bụrụ na ị gaa njem-oge, ma gwakọta na mpaghara 120,000 bi. Ya mere, a ogologo izu ụka ga-adị mma na-achọpụta a ọmarịcha obodo ochie na Belgium na-enwe mmasị n'ezie nke ọma-echebe akụkọ ifo amara.
Amsterdam ka eji ụgbọ oloko eme ihe
Brussels na-eji ụgbọ oloko
Iji ụgbọ oloko na-eme njem na Antwerp
Ghent ka Bruges Na A Train
7. Kacha mara mma Old Towns ileta Na China: Luoyang, China
Menlọ nsọ Longmen Grottos na Shaolin, bụ naanị 2 nke saịtị ndị mere Luoyang obodo ochie otu n'ime obodo ochie kachasị ama n'ụwa niile. ’Ll ga-ahụ etiti obodo ndị China oge ochie Luoyang, n’etiti Beijing na Xi’an, site ụgbọ oloko.
Obodo ochie nke Luoyang na-eguzo, akụkọ ihe mere eme na oge nke oge emetụbeghị, ebe 1600 BC. Ya mere, ọ ga-amasị gị ịhụ nnukwu ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ na-ekpuchi ndụ obodo. Na mgbakwunye, ị ga-agafe ebe ndị ahịa Silk Road mbụ gafere.
8. Obodo Ochie Mara Mma ile anya n’uwa niile: Prague
Obodo Ochie, ka ndi obodo mara, Obodo Ochie Prague, na-adọta ndị ọbịa kemgbe narị afọ nke 9. Town ga-adọrọ mmasị gị site na obodo ochie a mara oke mma. Ya mere, ọ bụrụ na ị nweta ohere, nleta Prague ma ọ dịkarịa ala maka izu ụka. N'ụzọ dị otú a, ị ga-achọpụta ọtụtụ ihe kpatara ya ji bụrụ otu n'ime obodo ochie kachasị mma n'ụwa niile.
Ebe ochie mere ochie na-anọgide na- etiti obodo, ruo taa, ebe maka ndu omenala niile. Ga-ahụ na ndị njem nleta niile na-ezukọ na elekere Astronomical elekere ọ bụla na etiti.
9. Obodo Ochie Mara Mma ile anya n’uwa niile: Amsterdam
Amsterdam bụ otu n'ime ihe kachasị na-ewu ewu n'obodo na Europe, na otu n’ime ndị kasị nta. Nke a pụtara na ị nwere ike ịgagharị n’obodo ahụ dum n’ime ụbọchị abụọ. Otú ọ dị, ihe otutu ndi njem nleta amaghi bu na obodo Dutch a mara nma bu otu n’ime obodo ochie n’uwa.
Ya mere, n'agbanyeghị oke ya, Obodo ochie nke Amsterdam nwere ọtụtụ ntụpọ pụrụ iche ị ga-achọ otu izu iji chọpụta. Obodo nke narị afọ nke 13 nwere ọtụtụ ogige ndị zoro ezo, agwaetiti nke obi iru ala, ma ọ bụ Oude Kerk, ụlọ kacha ochie na Amsterdam, na mpaghara uhie. Na mkpokọta, ị pụrụ ịhụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na Amsterdam karịa na omenala kanaal irughari ma ọ bụrụ na ị na-aim na chọpụtara ya tucked pụọ akụkọ.
10. Ping Yao Obodo Ochie Na China
Ihe kachasị amasị anyị banyere obodo ochie Ping Yao bụ njikọta nke ụdị ụlọ. Ka ị n'agagharị n'okporo ụzọ ochie, ụlọ ndị ahụ, ụlọ arụsị, na mgbidi obodo ga-akuko akuko 5 ọtụtụ narị afọ. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na e wuru obodo ochie Ping Yao na narị afọ nke 14.
Ọ bụrụ na ị hụrụ akụkọ ihe mere eme n'anya ma nwee mmasị na ọdịnala ndị China, mgbe ahụ ịga ije n'okporo ámá obodo ahụ ga-abụ ahụmahụ epic. Ga - anọ njem oge rue Pingyao bụ etiti akụ na ụba nke China, ma hụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbanwe.
Nke a oge ochie mkpuru bụ mfe inweta ụgbọ okporo ígwè, naanị gaa Pingyao Gucheng Railway Station, sitekwa ebe ahụ jiri bọs gbaga n'ọnụ ụzọ obodo.
Ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem a na-agaghị echefu echefu ma gbasaa gaa "Obodo 10 Oge Ochie Kachasị Mma ileta N'ụwa Nile".
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Mma Oge Ochie Towns ileta Worldwide” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fancient-towns-visit-worldwide%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ma ị nwere ike ịgbanwe / ja ka / es ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.
Oge ochie Oge ochieChina Obodo mara mmaEurope Bestoldtownsworldwide Train Travel